शनिबार, अगस्ट 28, 2010 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
जब तपाइँले मौका पाउनुहुन्छ, यसको प्रतिलिपि लिनुहोस् असफलता: सफलताको रहस्य मित्र रबी स्लटर द्वारा। रबीले सँगै एक उत्तम गाइड राखेका छन् सफलतापूर्वक असफल ताकि तपाइँ सिक्न र आफ्नो असफलता बाट बढ्न सक्नुहुन्छ। म किताब न्याय गर्न सक्दिन - त्यहाँ उद्योगका केही महान नेताहरूका अविश्वसनीय उपाख्यानहरू छन्।
यद्यपि मँ केहि सेयर गर्न चाहन्छु विफलता उद्धरण तपाईलाई प्रेरणा दिन पुस्तकबाट:
असफलताबाट प्राप्त ज्ञान प्रायः पछिल्लो सफलताहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सरल शब्दहरुमा, असफलता परम शिक्षक हो। डेभिड गार्विन
मैले आफ्नो क्यारियरमा ,9,000, ००० भन्दा बढी शटहरू गुमाएको छु। मैले लगभग games०० खेलहरू गुमाएको छु। छब्बीस पटक, म खेल जित्ने शट लिन को लागी भरोसा गरीएको छ र छुटेको छु। म आफ्नो जीवनमा बारम्बार असफल भएको छु। र यसैले म सफल छु। माइकल जोर्डन
असफलताले अवसरहरू लिनको लागि आवश्यकतालाई रेखांकित गर्दछ। क्लिच सहि छ: यदि तपाईंले कुनै जोखिम लिनु भएन, त्यहाँ कुनै पुरस्कारहरू हुनेछैनन्। र यदि तपाइँ जोखिम लिइरहनुभएको छ, लगभग परिभाषा द्वारा, तपाईं केहि विफल हुन लाग्नुहुन्छ। जेफ Wuorio
म १०,००० पटक असफल भएको छैन। मैले सफलतापूर्वक १०,००० तरिकाहरू भेटिए जुन काम गर्दैन। थोमा एडिसन
आफ्नै गल्तीहरूको खोजीमा आनन्द गर्न नसक्ने कोही पनि विद्वान कहलाउन योग्यको हुँदैन। डोनाल्ड फोस्टर
असफलता केवल फेरि सुरु गर्ने अवसर हो, यो समय अधिक बुद्धिमानीसाथ। हेनरी फोर्ड
एक विशेषज्ञ एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सबै गल्तीहरू गरे जुन धेरै साँघुरो क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। नील बोहर
हामी धेरै असफलताहरूको माध्यमबाट टेक्नोलोजीमा मात्र उत्कृष्ट प्रगति गर्न सक्छौं। टेको फुकुइ
जो सफल हुन्छन् आफैलाई असफल हुन अनुमति दिनेहरू हुन जान्छन्। क्रिस बोगन र जुलियन स्मिथ
नियम # १: तपाईंले असफल हुन सिक्नुपर्नेछ, जित्नु। डेभिड स्यान्डलर
यहाँ समान नामको साथ होन्डाको एक शानदार भिडियो हो, वर्षभरि होंडाको असफलताहरूको बारेमा छलफल गर्दै।
एक प्रतिलिपि अर्डर गर्नुहोस् असफलता: सफलताको रहस्य र रोबीको ब्लगमा चलिरहेको पोष्टहरू जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्विफलता.
टैग: विफलतासफलतासफलताको रहस्य
अगस्ट 30, 2010 मा 7: 54 AM
मलाई विश्वास छ कि यो केवल उद्योग नेताहरू, तर सामान्यतया नेताहरूमा सही छ। नेताहरू असफल।
उदाहरणको लागि, उसले आफ्नो जागिर गुमायो, आफ्नै बिज सुरु गर्‍यो र असफल भयो। उनी सभामुखको रूपमा, राज्य सभामा बोलेका थिए। उनी कांग्रेस, सिनेट र उप राष्ट्रपतिको लागि मनोनयन प्रयासमा पराजित भए। उनले एउटा क seat्ग्रेसनल सीट जिते र पुनः मनोनयन भएन! उनलाई नर्वस ब्रेकडाउन भयो र त्यसपछि राज्य भूमि अधिकारीको रूपमा अस्वीकृत गरियो। फेरि उनी सिनेटको दौडमा पराजित भए। उसले हार मानेन। उनी अब्राहम लिंकन थिए।
सेप्टेम्बर 6, 2010 मा 11: 50 AM
कुनै प्रकारले Google अलर्टहरूले मलाई यो चाँडै सचेत गराएन, तर डग धन्यवाद!